Bu'aawwan haaromsa gadi fagoon boodaa itti fufuu qabu
Mootummaan waggaa darbe irraa eegalee haaromsa gadi fagoo taasisuudhaan rakkoolee hawaas-dinagdee, siyaasaa, bulchiinsa gaariifi sassaabdummaa kiraan walqabatanii mul'achaa turan furuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Hojiilee hanga ammaatti raawwatamaniin bu'aalee jajjabeessoon galmaa'aa akkuma jiran rakkooleen utuu hinfuramin lafarra harkifatanis jiru
Caffeen Oromiyaa hordoffiifi to'annoo karoora hojii naannichaa ji'oota ja'an darbanii irratti taasiseen haaromsa gadi fagoon booda bu'aaleen jajjabeessoon galmaa'aan akkuma jiran rakkooleen hanga ammaatti furmaata quubsaa hin argannes jiraachuu adda baaseera.
Haaromsa gadifagoo naannichaatti hojiirra oolaa jiruun rakkooleen bulchiinsa gaarii sadarkaa adda addaatti qaamolee hawaasaa biraa ka’aa turan yeroo ammaa fooyya'iinsa agarsiiseera. Rakkoo hoji dhabummaa dargaggootaa furuuf sochiin taasifames jajjabeessaadha. Kenniinsi tajaajila haqaa sadarkaan jirus fooyya'iinsa agarsiiseera.
Rakkooleen bulchiinsa gaariin walqabatanii damee invastimantii irratti mul'achaa turanis bu’uura seeraan tarkaanfii barbaachisaan akka irratti fudhatamu ta'eera. Barsiisotni, hojjettootniifi jiraattootni magaalaa lafa mana jireenyaa akka akka argatan gariin ta'eera. Gaaffiiwwaniifi komiiwwan hawaasaaf hoggansaa hanga raawwattota hojiitti gurra kennuun furmaata fiduun jalqabameera. Kunimmoo haaromsa gadi fagoon booda jijjiramni hanga tokko naannicha keessatti mul'achaa jira jechuudha.
Haata'u malee jijjirama bu’uura sadarkaa hundaatti bifa walfakkaatuun jiraachuu dhabuun, gaaffiifi komii hawaasaa yeroon sadarkaa hundaatti hiikuu dhabuun, ijaarsi pirojektootaa harkifachuun, addaan ciccitiinsa ibsaa, daandiifi bishaan dhugaatii ammallee sadarkaa yaadameen hiikamuu dhabuusaatiin gaaffiifi komiin hawaasaa biraa ka'aa jira.
Kana malees hojii dhabeeyyii calaluu, gurmeessuufi bajeta hojiif barbaachisu adda baasuu, akkasumas hojiitti galchuu irratti qaawwi mul’achaa waan jiruuf komiin hawaasa biraa ka'aa jira.
Rakkoo mana jireenyaa furuuf qajeelfama mootummaan naannoo baasee godinaalee, magaalotaafi aanaalee hundatti bifa walfakkaatuufi qaama dhimmi ilaalu fayyadamaa taasisuu irratti harcaatiin ni mul'ata. Tajaajila haqa qabeessa kennuu irrattis ammallee rakkoon ni mul'atu. Haaromsi gadi fagoon sadarkaa hundatti karaa guutuu ta’een gaggeeffamuu dhabuufi hoggantoonni quuqama ummataa hin qabne tokko tokko ammallee ni mul'atu
Haaromsa gadifagoo kanaan rakkoolee bulchiinsa gaarii hawaasa mufachiisaa turan akkasumas gaaffiiwwaniifi komiiwwan hawaasaaf dhaggeeffachuun deebii akka argatan taasisaa jira. Hoggantoonni mootummaa sadarkaa sadarkaan jiranis hojiisaanii itti gaafatamummaafi iftoominaan akka hojjetaniif karaa saaqeera.
Walumaagalatti bu'aawwan haaromsa gadifagoon booda galmaa'aa jiran cimanii akka itti fufan taasisuuf hanqinaalee mul'atan furuun kallattiiwwan hojii ijoo gara fuulduraa ta'uun hojjetamuu qaba.
Torban kana/This_Week 12398
Guyyaa mara/All_Days 1821818